रुकुम पश्चिममा यमाहाको आधिकारीक डिलर
मंगलबार, मंसिर २१, २०७८ ११:४९:३०
अहिले दशैं, तिहार, छठकाे अफर चलिरहेकाे छ ।
सोमबार, कात्तिक ८, २०७८ कखरा संवाददाता
रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसीकोट खलंगामा यमाहाको आधिकारीक डिलर संचालनमा आएको छ । यसअघि लामो सयम देखि जिल्लामा यमाहाका मोटरसाईकल बिक्रि केन्द्र रहेकामा पहिलो पटक आधिकारीक डिलर संचालनमा आएको हो । २०७१ सालमा जिल्ला सदरमुकाम मुसीकोट खलंगामा खुलेको मुना मदन अटो वर्कशपले यमाहा मोटरसाईकलको डिलर संचालनमा ल्याएको छ । साउन २१ गतेबाट मुना मदन अटो वर्कशप यमाहाको आधिकारीक डिलर बनेको हो । मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर ५ बागबजारमा डिलर छ । डिलरबाट यमाहाका मोटरसाईकल र स्कुटर बिक्रि सुरु भएको छ । यसका साथै सर्भिस सेन्टर पनि संचालनमा रहेको मुना मदन अटो वर्कशपका संचालक आकाश रोकाले जानकारी दिनुभयो ।
यमाहाका मोटरसाईकलको आकर्षण राम्रो
डिलर आएदेखि हालसम्म २७ वटा मोटरसाईकल र स्कुटर बिक्रि भइसकेको संचालक रोकाले बताउनुभयो । जिल्लामा यमाहाका मोटरसाईकलको आकर्षण राम्रो रहेको उहाँको भनाई छ । एफ.आई सिस्टम र ब्लु कोर इन्जिन भएका कारण जिल्लामा यमाहाका मोटरसाईकलको माग बढि रहेको उहाँले बताउनुभयो । एफ.आई. सिस्टमले माईलेज बढी दिने, पिकअप राम्रो भएको र मौसमले कुनै असर नगर्ने भएका कारण यमाहाको माग राम्रो रहेको रोका बताउनुहुन्छ । यमाहाका मोटरसाईकल अफरोडमा समेत उपयुक्त भएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाका सडकलाई हेर्दा यमाहाका मोटरसाईकल धेरै ग्राहकको रोजाइमा परिरहेको भनाई उहाँको छ ।
उहाँका अनुसार डिलरबाट हाल बिक्रि भइरहेको एउटा मोडल बाहेक अन्य सबै मोटरसाईकल एफ.आई सिस्टमका छन् । स्कुटर भने सबै एफ.आई. सिस्टमका छन् । जिल्लामा स्कुटरको पनि माग राम्रो रहेको रोका बताउनुहुन्छ । जिल्लाका सबैजसो सडकमा २ जना मान्छेलाई सजिलै तान्न सक्ने भएका कारण यमाहाका स्कुटर रोजाईमा पर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । हाल डिलरमा २ लाख २४ हजार देखि ४ लाख ६२ हजार मुल्यका माेटरसाइकल र २ लाख ६३ हजार देखि २ लाख ७३ हजार मुल्य पर्ने स्कुटर रहेका छन् ।
दशैं, तिहार अफर
यमाहाले दशैं, तिहार र छठ पर्वजस्ता चाडवर्पलाई लक्षित गरेर अफर ल्याएको छ । दशैं देखि सुरु भएको अफर छठसम्म जारी रहने छ । अहिले यमाहाका मोटरसाईकल र स्कुटर खरिद गर्नेहरुका लागि ८ हजार देखि १० लाखसम्म नगद र सुनको तास पाउने अफर छ । संचालक रोकाका अनुसार स्क्र्याच गरेर न्युनतम ८ हजार नगद मोटरसाईकल तथा स्कुटर किन्नेहरुले अनिवार्य पाईरहेका छन् भने त्यो भन्दा माथिको रकम पनि पाईरहेका छन् । दशैं, तिहार अफर अन्तरगत सुरुको लटमा आएका २४ वटा मोटरसाईकल र स्कुटर बिक्रि भइसकेको र दोस्रो लटमा पनि २४ वटा मोटरसाईकल र स्कुटर आएको रोकाले बताउनुभयो । दोस्रो लटमा आएका ३ वटा मोटरसाईकल समेत दशैं, तिहार अफर अन्तरगत बिक्रि भइसकेका छन् ।
कम्युटरबाट मोटरसाईकलको समस्या पहिचान
संचालक रोकाका अनुसार डिलरमा कम्युटरबाट मोटरसाईकल र स्कुटरको समस्या पहिचान गरेर मर्मत गर्ने गरिएको छ । मिस्त्रीले कुनै समस्या पत्ता लगाउन नसकेकामा एफ.आई. स्टेशन मार्फत कम्युटरबाट समस्या पत्ता लगाउने र त्यसका आधारमा मर्मत हुने गरेको उहाँको भनाई छ । मोटरसाईकल र स्कुटर बिक्रि गर्नुमात्र नभई भरपर्दो सर्भिसिङ सेवा दिनु आफुहरुको लक्ष रहेको रोकाले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ८, २०७८, १३:०७:००